Hetauda Khabar - मकवानपुरमा देखिन थाले जंगली जनावर, मान्छे-जनावर द्वन्द !
मकवानपुरमा देखिन थाले जंगली जनावर, मान्छे-जनावर द्वन्द !
मकवानपुरको बिभीन्न स्थानमा पछील्लो समयमा जंगलि जनावरहरु देखापर्ने क्रम बढेको छ ।
जंगल घना भएसंगै यहाँका जंगलमा ठुलो जंगली जनावरहरु बढी मात्रामा देखा पर्न थालेका हुन् । मकवानपुरमा बाघले मान्छे मार्ने र मान्छेले बाघ मार्ने क्रम मकवानपुरमा देखापर्न थालेको छ । मकवानपुरको मनहरीमा बाघले मान्छे मारेको एक महिना नबित्दै एक साता अघि मकवानपुरको बकैयाको धियालमा मान्छेले बाघ मारेर छाला बिक्री गर्न लागिएको अबस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
शुक्रवार पनि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको ज्यामिरेको ढकाल खोल्सीमा फेरी पाटे ठुलो बाघ देखापरेको छ । बाघ देखेपछी स्थानिय वासिन्दाहरु भगाभाग भएको छ । गाउँ नजिकैको जंगलमा बाघ देखेपछी स्थानिय वासिन्दाहरु त्रसित भएका छन् । देखापरेको बाघलाई सुरक्षित रुपमा अबतरण गराउन लागिएको जिल्ला वन कार्यालय मकवापनुरका प्रमुख प्रलाद धितालले बताउनुभयो ।
यसअघि पनि मनहरीमा बाघले एक जनालाई आक्रमण गरेर मृत्यु समेत भएको थियो । यसअघि मकवानपुरको बकैयाँ गाउँपालिकाको धियालमा नौ फिट लामो बाघ देखापरेपछी वन्यजन्तुको सिकारगर्नेहरुले बाघको हत्या गरेका थिए । नौ फिट लामो पाटे बाघको हत्या गरेर छाला बिक्री गर्न लाग्दा प्रहरीले बकैयाबाट एक जनालाई बाघको छाला सहित पक्राउ गरेको थियो । अहिले छाला सहित पक्राउ परेकालाई अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको वन अधिकृत धितालले बताउनुभयो । यसैगरी जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुर र प्रहरीले घाईते मृग सहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा १९ नेवारपानी स्थित सडक खण्डमा मनहरीबाट हेटौडा तर्फ आउदै गरेको ना २ ह १३१५ नम्बर को अटोलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा घाईते मृग सहित पक्राउ गरेको जिल्ला वन अधिकृत प्रलाद धितालले बताउनुभयो । पक्राउ पर्नेमा हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्तिपुर बस्ने बर्ष २५ को आशिष लामा सोही ठाउ बस्ने बर्ष २८ का सरोज तामाङ र बर्ष १९ को अनिल तामाङ रहेका छन् ।
निजहरुलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको र घाईते मृगलाई जिल्ला बन कार्यालय मकवानपुरले उपचार सुरु गरेको छ ।